चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य - Nayapul Online
असोज ११, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
प्रा. डा. गोविन्द केसीले विधेयक पास नभए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर, सरकारको वेवास्ता र डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिका केही बुँदामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिले विधेयक पास हुन सकेन ।
बिहीबार संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने पूर्व तयारी थियो । समितिको बिहीबारको बैठकको सुरुमा नै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे । यसका लागि आफूसहित कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गरेका सबै संशोधन फिर्ता लिने र नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार दर्ता गरेको संशोधनलाई समर्थन गर्ने बताए ।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेल र नेकपाका सांसदहरुले विपक्षी सांसदहरुसँग छलफल भयो । उपसमितिको बैठक बोलाइयो । नेकपाका सांसदहरुले विपक्षी दलको प्रस्ताव राम्रो हो त भने तर, विधेयक अघि बढाउने रुची देखाएनन् ।